हेर्नुहोस् आज ५ गते कार्तिक बुधबार, तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ? - Financial Notices
मंसिर १७,२०७७ / ०६ : ५४
हेर्नुहोस् आज ५ गते कार्तिक बुधबार, तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ?
Financial Notices 2077-7-4
आर्थिक राशिफलः ५ गते कार्तिक २०७७ (बुधबार)
मेषः आम्दानीमा वृद्धि हुने र गरेका कामहरु राम्रो भएर जाने।
वृषः मेहनत गरेको कामबाट लाभ मिल्न सक्ने।
मिथुनः आकस्मिक धन खर्च हुन सक्ने।
कर्कटः नयाँ कामको सुरुवात हुन सक्ने।
सिंहः व्यवसायमा उन्नति हुन सक्ने।
कन्याः आम्दानीमा वृद्धि हुन सक्ने।
तुलाः खर्च बढ्नाले आर्थिक क्षेत्रमा समस्या आउन सक्ने।
वृश्चिकः आकस्मिक लाभ हुन सक्ने।
धनुः सुनचाँदी आदिबाट राम्रो लाभ हुने।
मकरः आम्दानी बढ्ने र साथीभाईको सहयोग प्राप्त हुने।
कुम्भः काममा ढिलासुस्ती हुन सक्ने।
मीनः काम गर्ने जोश जागर बढ्ने।